थाहा खबर: अविश्वासको प्रस्ताव परिस्थिति र उद्देश्यका हिसाबले अनुचितः प्रधानमन्त्री ओली
अविश्वासको प्रस्ताव परिस्थिति र उद्देश्यका हिसाबले अनुचितः प्रधानमन्त्री ओली
साउन ९, २०७३
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियाका हिसाबले सामान्य र स्वभाविक रहे पनि समय र परिस्थितिका हिसाबले अस्वभाविक रहेको बताएका छन्। संसदमा आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव समय, परिस्थित र उद्देश्यका हिसाबले अनुचित रहेको बताए।
'एउटा भनाई छ कपडा काट्नुअघि १० पटक नाप्नुपर्छ ताकि कैँची चलाएपछि पछुताउनु नपरोस्', प्रधानमन्त्रीले भने, 'मुलुकलाई अस्थितरताको भूमरीमा धकेल्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु अहिले पनि छन्।'
आफू संसदलाई सरकार गठनको निर्णाय थलो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अविचलित रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने- मेरा लागि अविश्वासका प्रस्ताव स्वभाविक कुरा हो। तर समय परिस्थित र उद्देश्यका हिसाबले दुनियालाई थाहा छ यो कति स्वभाविक छ?
मुलुकलाई अस्थितरमा धकेलिरहने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्व सल्बलाइरहेकै छन्। मुलुक अन्त्यहीन अवस्थातिर धकेलिने अवस्थाप्रति म गम्भीर छु।
२१ वर्षअघि वर्षायाम नै थियो। मनमोहनले नेतृत्व गर्ने सरकारलाई बजेटसम्म पनि ल्याउन नदिने राजनीति चक्रब्यूह बनेको थियो। ५ हजार फिटमाथिबाट हेलिकोप्टर खसेर दुर्घटनामा परी मृत्युसँग लडिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा समेत राख्न दिइएको थिएन। त्यो सरकारको गल्ती यो थियो कि बुढापाकाको मुहारमा हाँसो ल्यायो, सुकुम्बासीलाई छाप्रो दियो, बेवास्ता गरेको गाउँलाई वास्ता गर्‍यो, गोलीबिना देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्‍यो।
महाभारतमा खास परिस्थितमा चक्रब्यूहको चर्चा छ। अर्जुनका छोरा अभिमन्यु जो असाधारण योद्धा थिए, उनलाई नियम थिति विधि मिचेर आफू बहादुर हो भन्ने मान्छेले एक्लो पारेर आक्रमण गरेका थिए। आज त्यस्तै प्रयास देखिन्छ। त्यो त थियो द्वापर युगका कलिलो अभिमन्युको कथा। आज न द्वापर न त अभिमन्यु। याद रहोस्।
मनमोहन सरकार ढाल्दा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्छ भनेको थिएँ। लिगबाट रेललाई तल फ्याँकेपछि त्यो दुर्घटना हुन बाहेक अरु उपाय नै छैन। देशमा त्यस्तै भयो। मैले भनिरहनु पर्दैन।
प्रतिकुल अवस्थमा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मा सम्हालेको थिएँ। आन्दोलन वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा ४५ जनाको ज्यान गएको थियो। तीन हप्ता अघिदेखि नाकाबन्दी लागेको थियो। चाडपर्वका बेला जनताको चुल्हो बल्ने अवस्था थिएन।
आगो बलेको देशमा, धुलो उडेको देशमा, पीडादायी र अभावले ग्रस्त देशमा मैले जिम्मेवारी लिएको थिएँ। तर ती सबै प्रतिकूलतालाई पराजित र सामना गर्दै जब सामान्य अवस्थामा फर्काउने सफलता प्राप्त भयो। जब मुलुकले नयाँ दिशा लैजाने बेला भएको थियो, त्यति नै बेला गठबन्धनबाट प्रहार भयो। नीति कार्यक्रम पास हुने बेला वैशाखमा अचानक सरकार परिवर्तनको खेल भयो। अस्ति एउटा अचानक आक्रमणलाई एउटा विशेषता दिइएको थियो। जेहोस् सरकारमाथी पनि त्यस्तो आक्रमण भयो।
प्रस्तावित राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्या र नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा रहेका बेला प्रचण्ड आउनुभयो। मेरा निम्ति त्यो अप्रत्याशित मात्रै होइन, अकल्पनीय र अचानक थियो। विभिन्न कुराहरुमा हामीले व्यवस्थापन गररेका थियौँ। दलहरु आफ्ना बारेमा निर्णय लिन स्वतन्त्र छन्। तर सहकार्य तोड्दा निश्चित मूल्य मान्यताको त अलम्बन गर्नुपर्छ। दलबीचको सम्बन्धलाई छिर्के दाउको रुपमा प्रयोग गर्दा सम्बन्ध बिग्रन्छ।
९ बुँदेबाट तात्कालिक समाधान त खोज्यौँ तर आज स्पष्ट हुँदैछ कि साथीहरुको मनसाय अर्कै रहेछ। सहयात्री दलबाट प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सहयोग प्राप्त हुन्छ। बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने नियोजित हल्ला चलाएर, अविश्वासको वातावरण फैलाउन, सरकारलाई कमजोर बनाउन, नियोजित हल्ला चलाएर तीव्र रुपमा सरकारमाथि हल्ला फिँजाइयो।
एक्सन लिने कुरा भएको हो तर शेरबहादुरजीको उपस्थितिमा भनेको होइन। तर आपूर्तिका कुरा र शान्ति सुरक्षाको कुरा आएपछि मैले एक्सनको कुरा गरेकै हो। कतिपय नेता कार्यकर्ता प्रतिपक्षको रुपमा एक कदम अघि बढेर भन्ने सरकारको आलोचनामा उत्रिए। मैले नेताहरुलाई बोलाएर बारम्बार भने सहयात्रा इमानदारिताले चल्छ, संयुक्त सरकारमा बसेर त्यस्तो कुरा गर्न पाइँदैन। जथाभावी बोल्छ भने आफ्नो बाटोमा लाग्न सक्छन् भनेर मैले भनेकै हो। सरकारका ठूला दलले राष्ट्रिय सरकार बन्दैन भनेपछि हामीले किन पहल गर्ने?
सरकारबाट फिर्ता हुनु एक दिनअघि मेरा सवा दुई घण्टा लामो कुरा भएको थियो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ कि सरकार कसरी अघि बढ्ने हो के गर्ने हो। मोडालिटी ल्याउनुस् भनेको थिए तर उहाँले २ देखि ३ दिनमा ल्याउँछु भन्नुभयो तर भोलिपल्ट टेलिफोनबाट थाहा पाएँ कि मोडालिटी अर्कै रहेछ।
अविश्वासका प्रस्तावक र त्यसमा भाग लिनेले गरेको भाषण मैले सुनेँ। विरोध गर्नैपर्दा र निहुँ खोज्नुपर्दा कसरी खोज्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराको नमुना प्रस्तुत भएको छ। छापामार शैलीमा झ्याप्पै…
म माथिको अविश्वास कुनै कामको कारणले होइन रहेछ चित्त काटिएको कमलो मन दुखेको चित्त नबुझेको आदि कारणहरुले रहेछ। मैले मेरा मित्रको च्यातिएको मन अरुणा लामको गीतमा भनेझै धेरै पटक सिउने कोशिस गरेँ।
कहिले रात कहिले बिहान मैले मन तुन्ने काममा बिताएको छु। तर भयो के भने आज तुनेर पठाउँछु भोलिपल्ट आउँदा अर्कोपट्टी फर्केको छ। फेरि तुनेर पठायो अर्को दिन आउँदा अर्को तिर फर्केको छ। यसपछि सहकार्य गर्ने साथीहरु होशियार हुनुहोला।
हामीलाई त काम परुन्जेल प्रयोग गरियो त्यसपछि फ्याँकियो भन्नुभयो। आफै राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक हुने, एकपटक पनि बैठक नराख्ने अनि आफ्नो दुनो सोझो भयो भने सोझ्याउने अनि आरोप चाहिँ अरुको टाउकोमा हाल्ने? १४ प्रस्ताव अनुसार सरकार गएको छ कि छैन। एकएक बुँदामा छलफल गरौँ त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छै ।
सरकारमा हामीले सल्लाह गरी गरी नै चलेका हौँ। हामी त्यत्रो धेरै दिनदिनै जस्तो भेटघाट चिया खान मात्रै गर्थ्यौँ त? हामी घण्टौँ बस्थ्यौँ र परामर्श गथ्र्यौ। महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएका माननीय सरकारमा थिए। आफै सम्मिलित सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव? मैले यसमा धेरै भनिरहनु पर्दैन।
अवसरवादमा आफू अभ्यस्त भएकोमा गौरव गर्नेको म धेरै चर्चा गर्दिन। मलाई आश्चर्य लाग्छ यी सबै गतिविधिलाई राष्टिय सरकार निम्ति भनेर गर्न खोज्या के?
कुनै बेला राष्ट्रवादका नाममा सिनेमा हल विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी समेत खरानी पार्नेहरुले यस्तो राष्ट्रवादको विरोध गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ।
सुन्नुस् अडियो लाइभ
PMNepal is on Mixlr